30 Sanadood ka dib ma dhabaa Qabiilkii ayeynu ka Guurnay oo Xisbiyo Qaran ayeynu u Guurnay? Qalinkii A/rahman fidhinle UK – WARSOOR
1- Xisbiyada Somaalilaan ee maanta jiraa waa Xisbiyo mabda’oodu ku kooban yahay in kursiga lagu fuulo. Xisbiyada runta ahi sida aduunka oo kale waa Xisbiyo shacabku leeyahay oo xubnuhu bixiyaan taburucaad joogto ah bil kasta (membership fee) Waa Xisbiyo ilaaliya Xuquuqda xubnahooda, Waa Xisbiyo shacabku leeyahay ee aanu Gudomiyaha Xisbigu laheyn. Waa Xisbiyo ururiya awooda dadka muwaadiniinta ah kuwaas oo ku haga kuna hogaamiya barnaamijyo hufan oo dhinac kasta ka taabanaaya nolosha shacabkooda . Maanta ma jiraan Somaalilaan Xisbiyo leh qorsheyaal cokan oo ay ku hogaaminayaan danaha dhaqan dhaqaale ee bushada reer Somaalilaan ku gedaaman.